कोकाकोला खाएको १ घण्टापछि तपाईको शरीरमा के–के हुन्छ ? रोचक जानकारी - ज्ञानविज्ञान
केही दिनको झरी थापिमएसँगै वायुमण्डलमा तातो हावा चल्न थालेको छ । घामको राप थप चर्को बन्दैछ ।
तराई लगायतका क्षेत्रको तापमान उच्च रहने गर्छ । तराईका खासगरी शहरी क्षेत्रको तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुनेगर्छ । मध्य गर्मीमा काठमाडौंको तापमान ३० डिग्री सेल्सियस पुग्छ । रुपन्देही, भैरहवा, बारा लगायतको गर्मी खपिनसक्नु हुन्छ । यी क्षेत्रमा तातो हावा चल्ने गर्छ ।
यसरी बढ्ने गर्मीबाट कसरी राहत पाउने ?
केही विकल्प छन् । प्राकृतिक रुपमा र कृतिम रुपमा गर्मी छल्ने काइदा छन् । कोही गर्मी छल्न हिल स्टेशन अर्थात पहाडी क्षेत्रतिर उक्लन्छन् । कोही चिसो पानीमा डुबुल्की मार्छन् । कोही एसी, फ्यान वा कुलरको साहारा लिन्छन् ।
हिल स्टेशन जाने, पौडी खेल्ने आदि दीर्घकालिन उपाय होइन । किनभने हामी आफ्नो कामकाज, पेशा, व्यवसाय छाडेर गर्मी अवधीभर पहाडतिर उक्लन सक्दैनौ । चिसो पानीमा डुबुल्की मारेर बस्ने कुरा पनि भएन ।
गर्मी क्षेत्रमा घर, कार्यलय, कार्यथलो आदिमा फ्यान, एसी, कुलर जस्ता उपकरण जडान गरिन्छ, जसले कृतिम रुपमै भएपनि गर्मीबाट राहत दिलाउँछ । अर्थात आफ्नो कोठा, कार्यथलोलाई वाताअनुकुलित बनाएर गर्मी छल्न सकिन्छ ।
हुन त तपाईं/हामीले अनुभव गरेकै छौ, कुलर वा एसीमा लामो समय बस्दा टाउको दुख्ने, रुँघा लाग्ने जस्ता समस्या हुन्छ । खासगरी श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएकाहरुलाई यसबाट थप हानी हुन्छ । त्यसो भए यी उपकरणमध्ये कुन बढी प्रभावकारी र स्वास्थ्यका हिसाबले कुन उपयोगी त ?
हाम्रो स्वास्थ्यका हिसाबले एसी उपयुक्त कि कुलर ?
कतिपय अवस्थामा एसी पनि ठिक लाग्छ । किनभने यसले हावालाई चिसो बनाउनका साथै खानेकुरालाई पनि ताजा राख्न सहयोग गर्छ । त्यसैगरी कुलरको कुरा गर्दा यसले धेरै विद्युत खपत गर्दैन । स्वास्थ्यका हिसाबले चाहि कुन बढी उपयोगी त ?
साइनस र टाउको दुखाई
ति व्यक्ति जो एसीमा चार घण्टाभन्दा बढी समय बिताउँछन्, उनीहरुलाई साइनसको खतरा हुन्छ ।
तौल बढाउन सक्छ
कहिले काहीँ यस्तो पनि देखिएको छ कि, एसीको कारण व्यक्तिको तौल बढ्ने । कारण के हो भने, जब तपाईं एसीमा बस्नुहुन्छ तपाईंको मेटाबोलिज्म कम हहुन्छ । दिनभर एसीमा बसेर काम गरिरहँदा शरीरबाट पसिना निस्कदैन । शरीरको फ्याट बर्न हुँदैन । यही कारण मोटोपन बढ्ने भय रहन्छ ।
छाला रुखो हुन्छ
एसीमा लगातार बसिरहँदा छाला रुखो हुने समस्या हुन्छ । एसी २० देखि २२ डिग्रीसम्म चलाइएको छ भने त खास समस्या भएन, तर त्यो भन्दा बढी चलाउँदा त्यसले छालालाई रुखो बनाउँछ । यसैले एसीमा बस्दा पर्याप्त पानी पनि पिउनुपर्छ ।
ताजा हावाबाट बञ्चित
जब तपाईं लामो समय एसी रुपमा बस्नुहुन्छ, ताजा हावा प्राप्त हुँदैन । फ्रिन ग्यासले तपाईंको कोठाको वातावरण गर्मीलाई अवाशोषित गरेर कोठालाई चिसो बनाउँछ । गर्मी हावा र वतावरण पनि स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छ । शरीरको तापमान सन्तुलन राख्नका लागि हामीले चिसो हावाका साथै गर्मी हावामा पनि बस्नुपर्ने हुन्छ ।
चर्को गर्मी खुला ठाँउमा त झेल्नैपर्छ ।गर्मीको सिजनमा घरमा प्रवेश गर्दा पनि उकुस मुकुस हुनुपर्दा दिक्क लाग्छ । त्यसैले गर्मी महिनामा घरलाई सितल बनाइ राख्नुपर्छ ।
झ्याल, ढोका खुला राख्नुपर्छ, यद्यपी साँझको समयमा भने बन्द गर्नु पर्छ । किनभने यो समयमा मच्छड छिर्न सक्छ ।
झ्यालको पर्दा पातलो, पारदर्शी हुनुपर्छ । उज्यालो रंगको पर्दा उपयोगी हुन्छ । बेड कभर पनि सकेसम्म उज्यालो रंगको भए राम्रो ।
इनडोर प्लान्टले कोठको शोभा मात्र बढाउँदैन, सितलता समेत प्रदान गर्छ । झट्ट हेर्दा पनि सितल अनुभव हुन्छ ।
कोठामा अनावश्यक सामग्री धेरै राख्नु हुँदैन । सकेसम्म खुला हुनुपर्छ । एकै ठाँउमा धेरै सामग्री राख्दा पनि त्यसले गर्मी पैदा गर्छ ।
गर्मीमा स्वास्थ रहने तरिका यस्ता छन्
गाजर, गोलभेँडा, पालक, काँक्रो, खरबुजा, मेवा, आँपजस्ता फलफूलमा क्यालोरी कम हुन्छ । त्यही भएर गर्मीमा यस्ता मौसमी फल खानु राम्रो हुन्छ । यसले एसिडिटीको समस्याबाट पनि मुक्ति दिन्छ ।
यस्ता मौसमी तरकारी र फलफूल खाने गर्नाले शरीर शीतल रहन्छ ।
गर्मी मौसममा दिउँसोतिर भोक लाग्यो भने फलफूल, सलाद र सुप खान जोड दिनुपर्छ । यस्तो खानाले पेट पनि भरिन्छ र शरीरमा अनावश्यक बोसो पनि लाग्दैन । साथै, शरीरलाई गर्मी पनि गर्दैन ।
गर्मीको मौसममा मोटा मानिसले बिहानको खाजामा केरा खानु राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा वजन बढ्दैन । साथै, केरामा पाइने पोटासियम र आइरनले गर्मीमा मानिसलाई दिनभरि फुर्तिलो राख्न मद्दत गर्छन् ।
बिहान–बेलुका फटाफट हिँड्ने गर्नाले गर्मीमा ज्यादै राम्रो गर्छ । यसो गर्दा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढ्छ ।
रातको खाना खाएपछि १५–२० मिनेट बिस्तारै टहल्नु लाभदायक हुन्छ । जाडोमा भन्दा गर्मीमा यस्तो गर्न सजिलो हुन्छ ।
पानीको ‘इन्टेक’ बढाउने अनेक तरिका छन् । पानी खाइरहन मन लाग्दैन भने जुस, दही, लसी, कागतीपानी, सर्बत, नरिवलको पानी, तरकारी तथा गेडागुडीको सुप, फलफूल आदि खाएर शरीरमा पानीको आपूर्ति बढाउन सकिन्छ ।
गर्मीमा चिया, कफी सकेसम्म कम खानुपर्छ । ग्रिन टी खाने बानी बसाल्नु गर्मीमा बढी लाभदायक हुन्छ ।
गर्मीमा चिसो पानी पर्याप्त मात्रामा खाने गर्नाले पाचन प्रणाली सुध्रिने र शरीर शीतल हुने गर्छ ।
गर्मी मौसममा कोल्ड ड्रिक्स भन्दा फाइदाजनक हुन्छ मही
पेट पोल्ने तथा ग्याष्ट्रिकले अति नै सताएको छ भने घुट-घुट गर्दैै मही पिउनुस् । एकैछिनमा ठिक हुन्छ । साथै महीमा अदुवा तथा कालो मरिच राखेर पिउनाले अमिलो डकार आउने बन्द हुन्छ ।
गर्मी समयमा शरिरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मही पिउने गनुस् । महीमा पाइने इलेक्ट्रोलाइटले डिहाइड्रेसनको समस्या निर्मुल पारिदिन्छ ।
तैलीय तथा मसालेदार खानाले शरिरमा वोसो जम्मा हुँदै जान्छ । तर खानापछि एक गिलास मही पिउनाले शरिरमा वोसो जम्न पाउदैन साथै यसले कोलस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्दछ ।
नियमित रुपमा मही खानाले पेटसम्बन्धी सम्पुर्ण रोग निको हुन्छ । यसमा पाइने तत्वले पाचनक्रियालाई सहयोग पुर्याइ ग्याष्ट्रिक बढ्न दिदैन।
महीबाट भिटामिन बी कम्प्लेक्स, प्रोटिन र पोटासियम पाइन्छ । मही खानाले शरिरलाई उर्जा प्राप्त हुन्छ र फ्रेस महशुस हुन्छ ।
कस्तो खानेकुरा गर्मीमा सही हुदैन ?
तर, हाम्रो दैनिक पेय चिया र कफी भने गर्मीमा उपयुक्त हुन्न ।
५. तारेको खानेकुरा
६. जंग फूड
७. स्पाइसी फूड
गर्मीका लागि मासुजन्य खानेकुरा उपयुक्त मानिँदैन । यसमा रहेको प्रोटिन चाँडै पच्दैन । यही कारण पाचन प्रक्रियामा असर पुर्‍याउँछ ।
त्यसैले गर्मीमा ननभेज खानेकुरामा जोड दिनु हुँदैन । हरियो सागपात एवं मौसमी तरकारी सेवन गर्नुपर्छ, जसले पाचन यन्त्रलाई चुस्त र तन्दुरुस्त राख्छ ।
९. ड्राइ फ्रूट्स
शरीरलाई स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त राख्न सन्तुलित भोजनको आवश्यकता हुन्छ । यसको नियमित खानामा ड्राई फ्रूट्स पनि सामेल गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यका लागि यो फाइदाजनक छ ।
तर, गर्मी मौसममा भने होइन । किनभने यसले शरीरको तापक्रम वृद्धि गर्छ । यदि खाने नै हो भने, किसमिश जस्ता रसयुक्त ड्राइ फुड्स ठीक हुन्छ ।
Don't Miss it के तपाईको पेटमा ग्याँस भरिने समस्या छ ? यस्ता छन् सजिला उपचार बिधि – जान्नुहोस्
Up Next कस्तो खानेकुरा गर्मीमा सही हुदैन ? जान्नुहोस्